5 Zvinhu Zvaunofanira Kufunga Usati Watangisa Yako Ecommerce Webhusaiti | Martech Zone
Kufunga nezvekutanga webhusaiti yeecommerce? Hezvino zvinhu zvishanu zvaunofanirwa kufunga usati watanga yako ecommerce webhusaiti:
1. Iva nekodzero Products
Kutsvaga chakakodzera chigadzirwa nekuti ecommerce bhizinesi zviri nyore kutaura pane kuita. Kufunga kuti iwe wakadzikisa chikamu chevateereri, iwe chaunoda kutengesa kune, mubvunzo unotevera wezvaunotengesa unomuka. Pane zvinhu zvakati wandei zvaunoda kutarisa kana wafunga nezvechigadzirwa. Iwe unofanirwa kuona kuti chigadzirwa chaunosarudza kutengesa chiri kudiwa. Nzwisisa kuti iwe une chinangwa chekuita bhizinesi uye kuita mari.
Kuedza chigadzirwa nyowani kana kupa hazvisi zvinongoshanda chete uye zvinopedza nguva, asi zvinogona zvakare kuve zvinodhura zvakare. Panzvimbo pekuyedza chimwe chinhu chitsva, tsvaga chigadzirwa chiri kudiwa uye chiri mune isinganyanye kukwikwidza niche. Kuita basa rechikoro rinoita kunge basa, asi rinobhadhara zvikwereti gare gare apo yako ecommerce webhusaiti inokura.
2. Iva Nevakawanda Vatengesi Uye Shippers
Paunenge uchinge wapedzisa chigadzirwa chauchazotengesa, iwe unozofanirwa kuona kuti ungachiwana kupi kubva. Kunze kwekunge urikugadzira chako chigadzirwa 100% uri wega, pasina vatengesi vanobatanidzwa, ipapo unogona kutsika danho iri. Kune vamwe vese, hezvino izvo zvaunoda kuti urambe uchifunga.
Chikamu chakakosha cheiyo kugadzirwa kwenyika kuri kuitwa muAsia. Kutsvaga kubva kune idzi nyika kuenda kumwe kunhu seUS kunotora nguva. Kwete chete zvinotora nguva, asi zvakare ichave inonetsa sezvo iwe uri zviuru zvemamaira kubva kune vako vatengesi. Muzviitiko izvi, unofanirwa kutsvaga vagadziri kuti vaende panguva dzekutambudzika kana kusava nechokwadi.
Sezvineiwo, iwe unofanirwa kuve uine chero pakati pevatatu kusvika vana vagadziri vechigadzirwa chimwe chete. Iwe unofanirwa kuratidzana navo uye nekuvayambira kana iwe uchitarisira kuwedzera mukutengesa kana chimwe chinhu. Paunenge wapedza nekutsvaga mugadziri, iwe uchafanirwa kunetseka nezve kutumira chako chigadzirwa. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zviripo, uye zviri nani kuti uite nekushingairira kwako usati wafunga kuenda neimwe chete.
3. Gadziridza Yako Ecommerce Saiti Kune Shanduko
Ngatipindei mune yakasarudzika kudivi yekumhanyisa ecommerce bhizinesi. Kuti bhizinesi rako ribudirire, iwe uchafanirwa kutengesa. Kugadzira kutengesa kuri kushomeka zvakanyanya kana webhusaiti yako yakagadzirirwa zvisina tsarukano uye ichishanda sekufunga kwemushandisi.
Hira vagadziri uye vanogadzira vane ruzivo rwakaratidza mukugadzira mhedzisiro inotungamirwa mawebhusaiti kana iwe usina chivimbo chekuvaka saiti iwe wega. Ivo vanogona kupa zano maturusi senge chatbots, live live chat app, kana pop-ups izvo zvinogona kubatsira kuwedzera kutengesa. Pamusoro pezvo, ita shuwa kuti webhusaiti haina mahara kubva kune akakosha mabugs ayo anogona kutadzisa vako vanogona vatengi pavanenge vachiita kuburikidza nekuita mutengapwe.
4. Chengetedza Mukubudirira Kushambadzira.
Panguva ino, iwe une yako ecommerce webhusaiti kumusoro uye unomhanya, asi iwe hausi kuita mari. Kutanga kuunza imwe kuyerera kwemari, iwe uchafanirwa kutanga kuisa mari munzira dzakakodzera dzekutengesa. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvaunosarudza kubva. Kana iwe uchitsvaga iko kudzoka nekukasira, unogona kuenda nesocial media ads, yekutsvaga injini kushambadzira, kushambadzira kushambadzira, kutumidza mashoma.
Kune vanhu vazhinji, iwe unofanirwa kutanga neidzi nzira nhatu uye uone zvinounza shanduko kwauri. Zvino, kana iwe ukatanga kuita mari uye uri muchinzvimbo chekuyedza, ungangoda kutarisa mumazano ekushambadzira kwenguva refu senge yekutsvagisa injini (SEO), Zvemukati kushambadzira, kushambadzira, nezvimwe.
5. Gadzira Mapurisa Akajeka Pakutanga
kuva yakajeka mitemo zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti yako ecommerce webhusaiti zuva nezuva mashandiro anoita kuenda pasina chinorova. Aya marongero anosanganisira ako ega ega ega ega ega, mutemo wekudzoka, HIPAA kutevedzera kana iwe uchikodzera, nezvimwe.
Zviri nani kuti utaure nemumwe munhu ari nyanzvi mune izvi zvinhu. Nepo mikana yekuti iwe upinde mumatambudziko inofanira kunge iri mishoma, ita kuti ive zero nekuve yakajeka, kongiri marongero akagadzirirwa kukuchengetedza iwe nebhizinesi rako.
Sekutaura, iwe unogona kuenda kuburikidza nemitemo iriko pane mamwe anotungamira ecommerce hofori uye nevamwe vanotungamira vakwikwidzi mune yako niche.
SwiftChat inogona kukubatsira kuti uzive vashanyi vakakurumidza nekutaura chaiko uye uvaitise mukutenga. Rarama meseji muecommerce inogona kunge iri 400% isingadhuri pane kutsigirwa nefoni, inogona kuwedzera shanduko katatu kusvika kashanu, kudzikisa ngoro dzekusiya, kuwedzera kugutsikana kwevatengi, kuwedzera kuvimbika kwevatengi, uye kugadzirisa kugadzirwa kwevashandi vako.
Ziva Kumusoro Kwe SwiftChat
Tags: tauriranaichiyero chekushandura optimizationcromitemo yekuchengetedza dhataecommerce chatecommerce kuvhuraecommerce kushambadziraecommerce vanotakura zvinhuecommerce vanotengesaTangaLive Chatzvakavanzika urongwachigadzirwa musanganiswachigadzirwa kusarudzwachigadzirwa vatengesidzoka maitirovafambisi vengarava
Social media ecommerce kushambadzira chishandiso chine simba kwazvo. Iyo inokutendera iwe kutaurirana neindasitiri yako, vatengi, & musika nenzira yemunhu, yeruzhinji. Iwe unogona kushandisa social media kugadzira kubatanidzwa & kudyidzana, kuwedzera traffic kune yako webhusaiti, & kugadzira hwaro hombe hwevatengi. Kuchengeta toni yakasimba & hunhu hwekambani yako kuburikidza nesocial media kwakakosha nekuti kuenderana ndiko kunoumba kuvimba mukati mevateereri vako.